5 सर्वश्रेष्ठ शीतकालीन गन्तव्यहरू युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ शीतकालीन गन्तव्यहरू युरोप मा
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
युरोप दुनिया मा कुनै पनि स्थान विपरीत हो कि चिसो महिनामा एक निश्चित जाडो आकर्षण छ. त्यहाँ विभिन्न धेरै छ, र कुनै दुई ठाउँमा नै भावना र वातावरण छ. वास्तबमा, धेरै मानिसहरू सहर र शहर चिसो महिनामा एक यात्रा जस्तै महसुस भन्न नयाँ गन्तव्य. जाडो युरोप पूर्ण परिवर्तन गर्न शानदार क्षमता छ, र बारी मा, आगन्तुकहरु को लागी एक बिल्कुल नयाँ अनुभव बनाउन को लागी कि उनीहरु बर्ष को कुनै अन्य समय मा अनुभव गर्न सक्दैनन्. को गिरने हिउँ संग जाडो गतिविधिहरु र बनाउन सबै धेरै उत्सव महत्त्वपूर्ण बिदा धेरै ल्याउँछ. परिवर्तन र सौन्दर्य को प्रशस्त बावजुद, यो सबै भ्रमण गर्न असम्भव छ. यदि तपाईँ चाहानु हुन्छ भने भ्रमण गर्नु सबैभन्दा लोकप्रिय यात्रा स्थलहरू केही गर्न, यी भ्रमण5युरोप मा जाडो गन्तव्यहरू.
रेल परिवहन यात्रा गर्न सबैभन्दा वातावरण मैत्री तरिका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन विश्व मा सुरक्षित सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट.
1. जाडो गन्तव्यहरू युरोप मा: बुडापेस्ट, हंगेरी
तपाईं एक जाडो खोजिरहेको यदि भनेर विस्मित हुनेछ wonderland, त्यसपछि बुडापेस्ट भन्दा कुनै थप हेर्न. यो एक जाडो Getaway लागि सही शहर हो. धेरै बुडापेस्ट चयन गर्ने मुख्य कारण मध्ये एक किफायती दर छ. तपाईं एक किफायती दर को लागि एक राम्रो शहर अनुभव प्राप्त. बुडापेस्ट पर्यटक सामान्यतया पूर्ण छ गर्मीयाम मा. तथापि, को जाडो समयमा, तपाईं न्यूनतम भीडलाई संग शहरको सौन्दर्य हेर्न प्राप्त. देखि अलग, तपाइँ चिमनी केक र स्वादिष्ट वाइन को एक धेरै पाउनुहुन्छ.
थप बोनस शानदार मार्गरेट द्वीप छ. यो छ सिद्ध स्थान भ्रमण गर्न एक महाकाव्य snowball लडाई गर्न चाहनुहुन्छ भने. स्थानीय र पर्यटक एक धेरै आफ्नो साथीहरूसँग भेला र हिउँ आनन्द. यदि snowball झगडे लागि छैन, त्यसपछि महल अगाडि स्केटिङ आनन्द! बुडापेस्ट शहर पार्क को जाडो बेला एक आइस स्केटिङ रिङ्क हुन्छ. तपाईंले हिउँ मा खेल समाप्त, तपाईं स्नान गर्ने सार्न सक्नुहुन्छ. अद्भुत Gellert स्पा अप न्यानो र केही थर्मल पानी आनंद ठूलो ठाउँ छ.
2. भेनिस, इटाली
भेनिस मनमा आउन पहिलो कुरा हुन तपाईं युरोपेली जाडोयाम कल्पना गर्दा सक्छ. तथापि, तपाईं जाडो समयमा नहरहरुमा शहर यात्रा भने, तपाईं सधैंभरि यो सम्झना हुनेछ. यो भीड सडकमा र हल्ला क्याफे तल toned छन्, र तपाईं शहर को एक पक्ष हेर्न गर्मी देखाउन सक्दैन. को गर्मी महिना को सबै प्रयास र bustle एक जाडो टहलने लागि पूर्ण छ भनेर शान्त र निर्मल वातावरण संग बदलिएको छ. तथापि, यो गर्दा धेरै छिटो शहर जीवन आउँछ भनेर याद गर्न आवश्यक छ भेनिस कार्निवल वरिपरि रोल. हरेक फेब्रुअरी, शहर पर्यटकहरू एक वृद्धि हुन्छ, र सजिसजाउ मास्क शहर को सडकमा बाढी. सडकमा मा रचनात्मक वेशभूषा र डान्सरहरू जीवन शहरमा रंगीन इतिहास ल्याउन. के तपाईं कहिल्यै बिर्सन एक जीवंत जाडो चाहनुहुन्छ भने, आफ्नो सूची मा भेनिस राख्न.
जेनोआ भेनिस गाडिहरु गर्न
नाइस भेनिस गाडिहरु गर्न
पर्मा भेनिस गाडिहरु गर्न
लास्पेजीया भेनिस गाडिहरु गर्न
3. जाडो गन्तव्यहरू युरोप मा: पेरिस, फ्रान्स
फ्रान्स स्वादिष्ट भोजन र रोमान्टिक चल्छ संग मान्छे को बहुमत एसोसिएट्स. तथापि, देश अझ आकर्षक गर्दा वरिपरि जाडो रोल हुन्छ, विशेष गरी राजधानी मा. पेरिस तपाईं त्यहाँ वर्ष को कुन समयमा यात्रा कुनै कुरा आश्चर्यजनक छ. दुर्भाग्यवश, छैन धेरै मानिसहरू चिसो मौसममा यो अनुभव प्राप्त. पेरिस, प्रेम र रोमान्स शहर, तपाईं न्यानो ज्याकेट र अन्य जाडो पोशाक लगाएका आपत्ति छैन यदि तपाईं प्रसन्न र प्रभावित गर्न निश्चित छ. उत्सव सिजन जीवन पेरिस ल्याउँछ. पर्यटकहरू छैन मात्र Indulge प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ स्वादिष्ट भोजन र रक्सी चाडहरूमा. तथापि, यो पनि जस्तै घटनाहरू हेर्न सही समय छ Musée des कला Fairground मा महोत्सव अद्भुत र को जार्डिन des Plantes मा रोशनी महोत्सव.
शहर बजार अन्वेषण र सजाया सडकमा, तपाईं शहर को सौन्दर्य लिन गर्दा. जाडो को Seines बैंकहरू साथ एक पैदल लिन वा प्राप्त Le Marais गल्लीहरूमा हराएको सही समय छ. एक पटक तपाईं देख्न कि, तपाईं एक पेरिसियन क्याफे मा पप र एक राम्रो पेय आनन्द उठाउन सक्छौं. एक पटक भन्ने गरिन्छ, तपाईं सबै मुख्य कम लाइनहरू पेरिस आकर्षण हेर्न सक्नुहुन्छ.
4. भियना, अस्ट्रिया
पर्यटक हजारौं अस्ट्रिया सबै वर्ष दौर बगालको हुनत, त्यहाँ एक विशेष छ कहानी महसूस को जाडो समयमा. देश मा सबै सहर र शहर एकदम अद्वितीय छ कि एक enchanting महसूस छ. त्यहाँ नोभेम्बर मार्च गर्न सामान्यतया महत्वपूर्ण snowfall छ. हिउँ प्रेमीहरूको Adore अष्ट्रीया जाडोयाम निश्चित हो कि यो हालतमा. तपाईं एक अष्ट्रीया जाडो को सार अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, यात्रा भियना. यो महान् राजधानी यसको उत्सव आत्मा र विशेषता पोशाक लागि प्रसिद्ध छ. तपाईंले केही जाडो किनमेल लागि मूड मा हो भने, भ्रमणको निश्चित क्रिसमस बजार. भियना सबैभन्दा लोकप्रिय बजार केही युरोप को सम्पूर्ण मा छ. पर्यटकहरू स्वादिष्ट अष्ट्रीया भोजन आनन्द र केही mulled रक्सी पिउन प्राप्त. देखि अलग, त्यहाँ विभिन्न हस्तनिर्मित वस्तुहरू र स्वादिष्ट छन् चकलेट व्यवहार.
5. जाडो गन्तव्यहरू युरोप मा: इंटरलेकन, स्विट्जरल्याण्ड
तपाईं जाडो छुट्टी लागि शहर मा समय खर्च कल्पना गर्न सक्दैन भनेर कार्य को एक व्यक्ति हुन् भने, त्यसपछि इंटरलेकन स्विट्जरल्याण्ड मा तपाईं को लागि जाडो गन्तव्य हो. लोकप्रिय विपरीत, ठूलो शहर गन्तव्यहरू, इंटरलेकन आल्प्स नजिकै एक रिसोर्टमा शहर छ. skiers र Snowboarders हजारौं जाडो इंटरलेकन आफ्नो बाटो बनाउन र अविश्वसनीय परिदृश्य क्षेत्र प्रस्ताव को प्रयोग. इंटरलेकन दुवै दुनिया को सबै भन्दा राम्रो छ. पहिले, अचम्मको पहाड गतिविधिहरु निकटता र सुविधाजनक पहुँच. दोश्रो, यो सुविधा आउँदा चाहनुहुन्छ सक्छ एक सबै प्रदान गर्दछ. चाहे तपाईं हल्का आनन्द आनन्द, वा तपाईंले चरम बाटो मा आफ्नो सीमा परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ, इंटरलेकन लागि छ. जो मजा आफ्नो विचार छ, के तपाईं शहर फिर्ता आफ्नो बाटो बनाउन सक्छ भनेर थाह र केही Fondue आनंद खुशी हुनेछ.
युरोप सबैका लागि केहि छ. यसलाई आफ्नो जाडो जस्तै र प्रयोग देखिन्छ wonderland के निर्णय गर्न सम्म छ एक ट्रेन सेव त्यहाँ सम्म पुग्न. जाडो महिनाहरुमा अनुभव गर्न को लागी धेरै छ, तेसैले साहसी हुनुहोस् र एक साहसी कदम अगाडी बढ्नुहोस्.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 जाडो गन्तव्यहरू युरोप मा” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-destinations-europe%2F%3Flang%3Dne – (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel trainjourney रेल सुझावहरू travelaustria travelfrance यात्रा यातायात स्विट्जरल्याण्ड जाडोको गन्तव्य जाडो गन्तव्य जाडो यात्रा